किन ईटहरीमा आएका सबै डिएसपी बिवादमा मुछिन्छन ? - Purbeli News
किन ईटहरीमा आएका सबै डिएसपी बिवादमा मुछिन्छन ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १३, २०७५ समय: १८:४०:०६
ईटहरी । आफुलाई प्रदेश १ को राजधानी दाबी गरिरहेको सुनसरीको ईटहरी शान्ति सुरक्षाका सवालमा त्यति सक्षम छैन कि भन्ने भान हुन थालेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यलय ईटहरीमा आएका प्रायजसो सबै डिएसपीहरु बिवादमा मुछिँदै आएका छन । केही न केही केसमा उनीहरु फसिरहेका छन । के ईटहरीमा आउने सबै डिएसपी खराब छन ? यो प्रश्न नगरबासीहरुमा उठन् थालेको छ । पछिल्लो ३ कार्यकाललाई मुल्यांकन गर्दा कुनैपनि डिएसपी विवादरहित बन्न सकेनन् ।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यारा पक्राउ गरेर चर्चामा आएका बिनोद शर्मा आफुलाई इमान्दार र चतुर डिएसपीका रुपमा चिनाउँथे । उनको कार्यशैली अरुभन्दा अलि भिन्न पनि थियो । कारण उनी एउटा सेलिब्रेटी पुलिस अफिसर बनिसकेका थिए ।
आफुलाई ध्रुबेका रुपमा परिचित गराएका उनले ईटहरीमा हुने गरेको यौनधन्दाको पत्तासाफ मात्र गरेनन् उनलाई ईटहरीबाट छिट्टै धपाउने कारण पनि त्यही बन्यो । उनी चर्चा र बिवादमा रहेपनि पछिल्लो समय डा. सिके राउतलाई पक्राउ गरेर बहादुरी देखाएपनि त्यसले उनलाई बिवादमा तान्यो र उनी ईटहरीबाट बिदा भए ।
२. सञ्जय राउत
अपराध अनुसन्धानमा राम्रै दख्खल भएका मानिएका राउत अन्तत साढे ३३ किलो सुन काण्डमा मुछिए । अहिले उनी अपराधीसरह जेलको चिसो हावा खाईरहेका छन । उनको मुद्धा अन्तिम टुंगो नलागेपनि तत्काल उनी छुटने सम्भावन कम देखिन्छ । ईटहरीमा डिएसपी भएर आएका राउतको ईटहरी बसाई पनि सुखद रहेन ।
३. शिवकुमार श्रेष्ठ
केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जबाट ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरी आएका डिएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ शुरुमै बिवादमा तानिए । नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य तथा तरुण दल सुनसरीको अध्यक्ष सिजन गुरुङलाइृ ठगीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको आलोचना शुरु भयो । प्रदेश नम्वर १ प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले त उनलाई भष्ट्रचारी भएको आरोप लगाउदै कारवाही गर्न माग गरेका छन । प्रमुख सचेतक कार्कीले मोरङमा रहँदा पाँच हजार घुस खाएको प्रमाण आफुसँग भएको दाबी गर्दै कारवाहीको माग गरेका हुन । उनले मोरङमा रहदा केटा र केटीको विषयमा पाँच हजार घुस खाएको र इटहरीमा पनि सिजन गुरुङलाई एमालेको इशारामा फसाउन खोजेको आरोप छ ।
नेपाली काँग्रेस सुनसरीका सभापति तथा प्रदेश नम्वर १ का विपक्षी दलका नेता राजिव कोइरालाले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी परेकाहरु खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको तर एक जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले काँग्रेस तर्साउन खोजेको आरोप लगाए । बिना कारण पक्राउ गरिएका गुरुङलाई सम्मानपुर्वक रिहाई नगरिए सुनसरी काँग्रेसले थप कडा आन्दोलन थाल्ने कोइरालाले चेतावनी समेत दिए ।
गुरूङलाई बिनासर्त रिहाइको माग गर्दै आईतबार कांग्रेस कार्यकर्ताहरू सडकमा निस्किएर नाराबाजी गरेका छन । इटहरी २० तरहराकी तीर्थकुमारी गिरीको १० धुर जग्गामा बनाएको घर र त्यसवापतको भाडा समेत गुरुङले ६८ सालदेखि खाँदै आएको उजुरी परेपछि गुण्डागर्दिको आरोप लगाउदै इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले नेता गुरूङलाई गत शुक्रबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसरी पछिल्लो केही उदाहरणलाई मात्र हेर्ने हो भनेपनि ईटहरीमा आएका सबै डिएसपी बिवादरहित बन्न सकेका छैनन । यस्ले उनीहरुको कार्यक्षमता समेत दर्शाएको छ ।